Mutambo weZigaro wallpapers | IPhone nhau
Akanakisa Mutambo weZigaro mapikicha e iPhone
Zuva rakamirirwa nevateveri veMutambo weZigaro ratosvika. Kwemaawa mashoma, Chikamu chekutanga chemwaka wekupedzisira weMutambo weZigaro chave kuwanikwa kuburikidza neHBO, imwe yeakanyanya kubudirira akateedzana emakore apfuura pane ese HBO uye terevhizheni zvakajairika.
Kana iwe uri muteveri wenyaya dzino, iwe unogona kudaro kudzivisa marudzi ese evapambi, vapambi vausingawani munyaya ino. Iwe unongowana chete akasiyana mapikicha anokwana zvakakwana pachiratidziro che iPhone yako uye chaunogona kunakidzwa neyaunofarira akateedzana.
Iwo mapikicha atinokuratidza pazasi, tiratidze akateedzana emifananidzo yeiyo vanhu vanonyanya kufarirwa mune akateedzana. Kana iwe usiri kuda kutsvaga kutsvaga internet kuti uwane mifananidzo yeaya akateedzana uyezve uchitamba navo kuti ukwane chidzitiro cheyako iPhone modhi, uyu muunganidzwa uchave wakanaka kwauri.
Khal Drogo (Jason Momoa) kubva kuMutambo weZigaro achave ari mukugadzirwa kweApple
Ese mapikicha atinokuratidza mune ino chinyorwa, inowanikwa mukugadziriswa kukuru, saka vanoenderana zvakakwana kune iyo skrini yechero iPhone Nehurombo, ivo havaenderane neiyo skrini yeiyo iPad, kunyangwe kana isu tikangowedzera iyo nzvimbo iyo inonyanya kufarira imwe yemifananidzo iyi, tinogona kuishandisa pasina dambudziko.
Kuti utore mifananidzo yaunonyanya kufarira, unofanira kungozvinyora pairi, wobva wadzvanya uchichengeta chigunwe chako pamufananidzo uri mubvunzo. Kutevera, tinya paSave mufananidzo kuitira kuti ichengetwe pane yedu kifaa uye inogona kushandiswa gare gare se Wallpaper.
Apple inobvumidza kuburitsa Pachinko nhepfenyuro inopfuura bhajeti yeMutambo weZigaro
Chinja iyo yekumberi mufananidzo weedu iPhone
Kana iwe uchiri kusaziva maitiro ekutsiva iyo yepashure mufananidzo weiyo iPhone yako, heano matanho ekutevera:
Kutanga, tinokwira kumusoro Zvirongwa.
Tevere, tinya pane Mapikicha> Sarudza imwe kumashure.
Tevere, tinya pane Mifananidzo yese, Kuti usarudze mufananidzo wekushandisa sepashure uye watakambo chengeta pane yedu kifaa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Akanakisa Mutambo weZigaro mapikicha e iPhone
iOS 13 ichaunza zvakawanda zvitsva maficha, kunyanya iyo iPad
Nei ichiisa "Kuchenesa" pane yako iPhone mifananidzo